नेपालका अधिकांश संक्रमित भारतबाट: संक्रमण पोजेटिभ भएकालाई नै सीमामा ल्याएर छोडेको खुल्यो ! — SuchanaKendra.Com
नेपालका अधिकांश संक्रमित भारतबाट: संक्रमण पोजेटिभ भएकालाई नै सीमामा ल्याएर छोडेको खुल्यो !
बारा । नेपालका लागि भारतले गरिरहेको दुखद कार्यको खुलासा भएको छ । यतिहदसम्मपनि गर्छ होला भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ । आज एक व्यक्ति त्यहाँ संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि नेपालको सीमा ल्याएर छोडिदिएको खुल्न आएको छ । उनलाई सरकारसँग हारगुहार गरेर नेपाल छिर्न भनिएको खुलेको हो । जब उनी नेपाल भित्रिएर क्वारेन्टाइनमा बसे त्यसपछि स्वाब लिनेबेलामा केरकार गर्दा मात्र यो कुरा खुल्न आएको हो ।नेपालका धेरै जसो कोरोना भाइरस ९कोभिड–१९० संक्रमित भारतको क्वारेन्टाइनमा बस्दै नेपाल आएका र उनीहरुको सम्पर्कमा आएकाहरु नै छन् । यसले धेरैजसो संक्रमित नेपाली सीमामा पठाइरहेको त छैन भन्ने सोच्न बाध्य बनाएको छ । नेपालमा केही मात्र उनीहरुबाटै स्थानीय रुपमा फैलिएपछिका छन् । यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संसदमा सम्बोधनका बेला भारतबाट आएको भाइरस निक्कै कडा भएको टिप्पणी गर्नु सामान्य छ । किनकी चीनमा ८० हजार माथी मानिस संक्रमित हुँदा मात्र ४ हजारको हाराहारीमा मात्र निधन भएको छ ।तर नेपालमा सय कै डिजिटमा रहँदा ३ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । त्योपनि कुनै स्वास्थ्य समस्या नदेखिइ । एकैपटक निधन भएकाहर धेरै छन् । अहिले फेरी अर्का भारतको क्वारेन्टाइनमा बसेर फर्किएका बाराको पचरौता नगरपालिका–१ का एक युवकमा कोरोना संक्रमण पोजेटिभ देखिएपछि सोधपुछबाट खुलेको तथ्यले सोच्न बाध्य बनाएको छ । अहिले उनी अस्पताल भर्ना भएका छन् । यसले के देखाउँछ भने भारतको क्वारेन्टाइनमा बसेका अधिकांश संक्रमित भएका छन् । उनीहरुलाई जानी–जानी नेपाल पठाउँदै छ । रोजगारीको सिलसिलामा भारतको दिल्लीबाट नेपाल आउँदै गर्दा भारतीय प्रहरीले औदापुरमा रोकेर क्वारेन्टाइनमा राख्यो ।
उनको त्यहाँ परीक्षण गरियो । उनी त्यहाँ पोजेटिभ भए । त्यसपछि उनी निको नभइ कसरी सीमामा आए । खोजी गरिदैछ । उनको त्यहाँ संकलन गरिएको स्वाबको पोजेटिभ रिपोर्ट देखिएको खबर त्यहाँ स्थानीय रुपमा बुझ्दा खुलेको छ । भारतको सिमा क्षेत्रमा रहेको क्वारेन्टाइनमाबाट उनी सीमा सम्म आए । त्यही भीडमा नगरपालिकाको समन्वयमा उनलाई नेपाल भित्र्याईयो । उनै ३० वर्षिय युवक ४ दिनदेखि पिपरपातीको क्वारेन्टाइनमा रहेको पचरौता नगरपालिकाका मेयर रमेश कुमार यादवले बताए। क्वारेन्टाइनमा राखिएका युवकले चिकित्सकलाई स्वास दिन अफ्ठेरो भएको बताएका थिए,’ मेयर यादवले भने, ‘त्यसपछि सोधखोज गर्ने क्रममा भारतकै क्वारेन्टाइनमा स्वाब संकलन गरिएको रहेछ, स्वास्थ्यकर्मीमार्फत बुझ्दा रिर्पोट पोजेटिभ आएको खबर आयो।’ नेपालमा पुनः परीक्षण गरेपछि मात्र पुष्टि गर्न सकिने मेयर यादवले बताए। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रप्रसाद पण्डितले भारतमा संक्रमित भएको खबरका आधारमा क्वारेन्टाइनबाट निकालेर कलैया अस्पतालमा रहेको आइसोलेसन वार्डमा भर्ना गरिएको बताए। संक्रमित भनिएका युवकको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्ने तयारी भईरहेको उनले जानकारी दिए। उनले नेपालमा गरिएको परीक्षणको रिर्पोट नआएसम्म पुष्टि गर्न नसकिने बताए।